ㆍISBN : 8983148721
Evhangeri yemvura noMweya ndiyo kururama kwaMwari!
Mashoko ari mubhuku rino achava nokugutsa nyota yemoyo wako. Nhasi uno vaKristu vanoramba vachirarama apo vasingazivi mhinduro yezvokwadi kuzvivi zvomene izvo zvavari kupara zuva nezuva. Ko unoziva kuti kururama kwaMwari chii here? Ndinovimba kuti uchava nokuzvibvunza mubvunzo uyu ugova nokutenda mukururama kwaMwari, uko kunoratidzwa mubhuku rino.
Kururama kwaMwari kwakava neevhangeri yemvura noMweya. Asivo, senhaka yakakosha, kwakava nokuramba kwakavanzarikwa kubva kumeso evateveri vechitendero kwenguva refu. Semhedzisiro, vanhu vazhinji vakabva vava nokuvimba pamwe nokuzvikudza nokuda kwekururama kwavo pauzima, pachinzvimbo chokudavira mukururama kwaMwari. Naizvozvo, dzidziso dzechiKristu dzisina kana nematuro ose dzakatanga kuva daviro dzepamusoro mukati memoyo yevatendi, kuita sokuti dzidziso idzi dzakanga dziine kururama kwaMwari.
Dzidziso yeMutondwe, Yokururamiswa, neyoKuwedzera Kuitwa-mutsvene ndidzo dzidziso dzechiKristu hombe, idzo dzakava nokuunza kusanzwisisa pamwe neshayisano mukati memoyo yevatendi. Asi zvino, vaKristu vazhini vanofanira kuziva Mwari patsva, vanofanira kudzidza pamusoro pokururama kwavo uye vagoramba vari mukutenda kwakasimbiswa.
"Ishe vedu avo vakava kururama kwaMwari" richava nokupa moyo yenyu kunzwisisa kukuru pamwe nokuitungamirira kurugare. Munyori anoda kuti uve nokuwana chiropafadzo chokuva nokuziva kururama kwaMwari. Dai waro maropafadzo aMwari ava newe!
SN/05/Ch1-1_Mhinzo yeChitsauko 1 chaVaRoma.mp3
1. SN/05/Ch1-1_Mhinzo yeChitsauko 1 chaVaRoma.mp3
2. SN/05/Ch1-2_Kururama kwaMwari Uko Kunoratidzwa Mukati meEvhangeri.mp3
3. SN/05/Ch1-3_Vakarurama Vachararama Nokutenda.mp3
4. SN/05/Ch1-4_Vakarurama Vanorarama Nokutenda.mp3
5. SN/05/Ch1-5_Avo Vanodzivisa Zvokwadi Nokusarurama.mp3
6. SN/05/Ch2-1_Mhinzo yeChitsauko 2 chaVaRoma.mp3
7. SN/05/Ch2-2_Avo Vasinehanya Nenyasha dzaMwari.mp3
8. SN/05/Ch2-3_Kudzingiswa Ndiko Kwemoyo.mp3
9. SN/05/Ch3-1_Mhinzo yeChitsauko 3 chaVaRoma.mp3
10. SN/05/Ch3-2_Kuponeswa Pazvivi Kunovuya Nokutenda Chete.mp3
11. SN/05/Ch3-3_Unotenda Mwari Here Nokutipa Ishe？.mp3
12. SN/05/Ch4-1_Mhinzo yeChitsauko 4 chaVaRoma.mp3
13. SN/05/Ch4-2_Avo Vakagamuchira Ropafadzo yeDenga noKutenda.mp3
14. SN/05/Ch5-1_Mhinzo yeChitsauko 5 chaVaRoma.mp3
15. SN/05/Ch5-2_Kuburikidza Nomunhu Mumwe.mp3
16. SN/05/Ch6-1_Mhinzo yeChitsauko 6 chaVaRoma.mp3
17. SN/05/Ch6-2_Zvokwadi Inoreva Bhapatidzo yaJesu.mp3
18. SN/05/Ch6-3_Pirai Mitezo Yenyu seNhumbi Dzokururama.mp3